Fahafantarana ny maha-zava-dehibe ny torolàlana momba ny kalitaon'ny Inventory (IQG) | Martech Zone
Fahafantarana ny maha-zava-dehibe ny torolàlana momba ny kalitaon'ny fanatobiana entana (IQG)
Alarobia, Jolay 6, 2016 Ted Dhanik
Ny mividy haino aman-jery an-tserasera dia tsy mitovy amin'ny fiantsenana kidoro. Ny mpanjifa iray dia mety hahita kidoro amin'ny magazay iray izay tadiaviny fa tsy fantany fa amin'ny magazay iray hafa dia vidiny ambany ilay izy satria izy manana anarana hafa. Ity scenario ity dia manahirana be ho an'ny mpividy ny mahalala tsara izay zavatra azony; Toy izany koa ny dokambarotra an-tserasera, izay amidy sy amidy ary averina amboarina indray ireo singa amin'ny alàlan'ny mpamatsy samihafa, mamorona tsena feno zavona izay tsy dia mangarahara loatra ny mpividy.
Ny olana dia avy amin'ny zava-misy fa misy orinasa an'arivony eny amin'ny habakabaka, maro amin'izy ireo no samy manana ny fiteniny, ny fitsipika samihafa, ny metrika samihafa ary ny fomba hafa amin'ny fampandehanana ny orinasany. Ity tsy fahampian'ny fomba fanamiana ity dia nahatonga ny Torolàlana momba ny kalitaon'ny Inventory TAG (IQG), dingana fanamarinana vao misondrotra ho an'ireo mpivarotra dokambarotra nomerika. IQG dia manome fenitra fototra amin'ny fifanakalozana, mamela ny mpividy handray fanapahan-kevitra mifototra amin'ny kalitao. Izy io dia miantoka ny filaminan'ny fiarovana sy ny mangarahara ho an'ny mpividy.
Ny tanjon'ny programa dia ny hampiroborobo ny tontolon'ny fahatokisana ny tsena ary hampihena ny fifandirana. Ireo torolàlana ireo dia manome fiteny iraisana izay mamaritra mazava tsara ny toetra mampiavaka ny lisitra dokam-barotra sy ny fifanakalozana manerana ny rojom-bidin'ny doka. Ireo mpivarotra dia afaka mampiasa ity rafitra fampandrenesana iraisana manerana ny indostria ity mba hiantohana ny fanarahan-dalàna amin'ny ambaratonga lehibe ary hanamorana ny famahana ny olana sy ny fitarainana.
Ny mpivarotra dia manana fotoana handresena ny sombin-javatra amin'ny alàlan'ny fandraisana anjara amin'ny programa IQG ary hahazoana fanamarinana avy amin'ny antoko fahatelo amin'ny fifehezana sy ny fizotrany mifandraika amin'izany. Ireo fitsipika ifotony ireo dia manome antoka fa ny mpividy dia mahatakatra tsara ny zavatra novidiny, ary ireo mpivarotra dia manambara ny vaovao mety hanamorana izany; fitaovana mitombina tsara amin'ny fitondrana orinasa.
IQG dia manatsara ny indostria iray manontolo amin'ny fiarovana ireo mpanao dokambarotra na mpanonta. Ireo torolàlana ireo dia miantoka ny votoatiny sy ny torolàlana famoronana izay miaro ny marika sy ny mpanonta amin'ny fifandraisany amin'ny atiny izay tsy azo antoka. Ny mpanao dokam-barotra dia afaka miantoka fa tsy mandeha amin'ny tranonkala vetaveta ny doka ataon'izy ireo, ary ny mpanonta dia afaka manakana ny doka ambany kalitao tsy mendrika amin'ny famoahana azy ireo amin'ny tranokalan'izy ireo.
Lafiny iray hafa manan-danja amin'ny IQG ny fanerena ny mpandray anjara hanatsara ny fizotran'ireo rafitra voalamina tsara. Ny ekipa mpanara-maso dia mandinika ny fizotrany ary manome toky fa ny orinasa dia manaraka ireo torolàlana ireo. Io fanomezan-toky io dia mamorona fanamarinana sy fifandanjana manerana ny orinasa. Amin'izany, ireo auditors dia manala ny hevitra momba ny fahalalana andrim-panjakana amin'ny alàlan'ny fanaovana antontan-taratasy momba ny orinasa ary mijanona mifanaraka amin'ny fizotrany.
Ary farany, IQG dia manome lanja ny toerana tokony hisy azy. Amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo sosona tsy mivadika izay tsy fantatra ny loharano, ireo mpilalao dia afaka manao orinasan-dàlana tsara kokoa. Io dia ahafahan'ny mpanao dokambarotra sy ny mpampanonta miresaka malalaka sy mangarahara momba ireo singa ampiasainy. Miaraka amin'ny sehatry ny doka misy kalitao avo lenta kokoa, afaka manao fampielezan-kevitra mahomby kokoa ny mpanao dokam-barotra. Mandritra izany fotoana izany, ity lisitra ity dia manome ny mpanonta fotoana ahazoana CPM ambonimbony kokoa amin'ny alàlan'ny famoahana ny sandany sahaza ho an'ireo singa voamarina ireo.
Ny dokambarotra an-tserasera dia orinasa tanora sy mivoatra, ary rehefa mihalehibe ny indostria dia manana fotoana ahafahan'ny mpilalao mamolavola sy manamafy ny làlan-kalehany. Ny IQG dia manatsara ny haavon'ny kalitaon'ny tahiry ary manome marika manana vahaolana avo lenta sy mahomby indrindra amin'ny dokambarotra ampitan-tserasera. Ity dia dingana iray hafa amin'ny tetikadin-tsika marobe sy mivoatra mba hiantohana ny kalitao sy ny lanja ho an'ny rehetra - marika, masoivoho ary mpanonta.
Momba ny fandraisana anjara: BDR
Handray anjara: BDR no mitarika ny fiampangana amin'ny fenitra sy ny fanamarinana raha ny antifraud, malware sy kalitaon'ny tahiry no resahana. Mandray anjara: BDR dia lasa iray amin'ireo orinasa voalohany nanamarina tsy miankina ny fenitra QAG ary eo am-pikatrohana izy ireo Fanamarinana IQG. Handray anjara: ny BDR dia mbola miasa miandalana miaraka amin'ny mpanonta mba hiadiana amin'ny anton-javatra izay misy fiatraikany ratsy amin'ny kalitaon'ny tahiry.
Tags: fanisana amin'ny dokadokam-barotrafanaovana hosoka amin'ny dokam-barotralisitra dokam-barotrakalitaon'ny dokaantifraudkalitaon'ny tahiryTorolàlana momba ny kalitaon'ny tahiryiqgmalwaredokam-barotra an-tseraserampitorytenifototraTorolàlana momba ny kalitaon'ny Inventory TAGfanamarinana avy amin'ny antoko fahatelo
Ted Dhanik no CEO sy mpiara-manorina anjara: BDR, Inc. Ted dia talen'ny Executive Executive manara-maso ny marketing stratejika, ny varotra ary ny fampandrosoana ny orinasa, ny fitantanana ny fifandraisan'ny mpanjifa ary ny fahazoana atiny.
Ahoana no hampitomboan'ny fianarana milina sy ny acquisio ny orinasanao
Mitohy ny evolisiona Dynamic Evolisiona